သံသရာတဈကှမှေ့ာ သူနဲ့ ခဏခလုတျတိုကျခဲ့ရုံပါ … – Shinyoon
သံသရာတဈကှမှေ့ာ သူနဲ့ ခဏခလုတျတိုကျခဲ့ရုံပါ …
June 15, 2021 by Shin Yoon
တှဆေုံ့ခွငျးတှဟော ဘယျတော့မှ မတျောတဆမဟုတျဘူးတဲ့ … ငွငျးပါရစေ တကယျတော့ သူနဲ့ ဆုံခဲ့တာတော့ တကယျ့ကို မတျောတဆ သကျသကျပဲ ဖွဈမှာပါ ခလုတျလေး တိုကျမိတယျ ပွီးတော့ ကိုယျ့လမျးကိုယျ လြှောကျသှားတယျ ဒါပါပဲ ထူးဆနျးတာက အဲ့ဒီထှကျသှားတာလေးကို ကိုယျက ငေးကွညျ့နမေိသေးတာ
တဈခြိနျခြိနျမှာ ကိုယျ့နာမညျကို မှတျမိနဦေးမယျဆိုရငျ တျောတျောလေး ကံကောငျးနပွေီလို့ပဲ ဆိုရတာတော့မှာပေါ့ အရာရာကို မှတျမိနတေဲ့ကိုယျက အဲ့ဒီဆုံတှခြေိ့နျတိုငျးကို အမွဲအမှတျရနတောတော့ ခကျတယျ ဘယျလိုပွုံးပွဖူးတာကအစ စကားပွောရငျ သူ့နှုတျခမျးလေး ဘယျလိုဖွဈသှားတာအဆုံး အသေးစိတျ မှတျမိနတောခကျတယျ
သူက ပေါ့ပါးတယျ ဘယျအရာကိုမှ သိပျအလေးအနကျမထားတတျဘူး ကြှနျတျောတို့တှေ တကယျပဲ ခဈြခဲ့တာဆိုတာကိုတောငျ သူ စိတျထဲရှိမနတေော့ဘူး သံသရာတဈကှမှေ့ာ ခဏခလုတျတိုကျပွီး ကိုယျ့လမျးကိုယျဆကျပွီးလြှောကျကွသလို သူကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ သူ့လမျးသူ ဆကျလြှောကျသှားတယျ
တားလိုကျရမလား …. ကွိုးစားကွညျ့ခဲ့ဖူးတယျ မကျြရညျတှနေဲ့ဆိုရငျကော ငိုခဲ့ရဖူးပါတယျ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့အနားမှာ မပြျောတဲ့သူ ကိုယျနဲ့ဝေးမယျ့အရပျကိုပဲ ရှေးတာ သဘာဝကပြါတယျ သဘာဝမကခြဲ့တာက သူတောငျ ဒီလို အေးစကျပွီးနနေိုငျရငျ ငါကကော ဘာလို့မနနေိုငျတာလဲ ဆိုတဲ့ အဖွတှေဟော ရှိမနခေဲ့တာပါပဲ ရှာကွညျ့ဖူးတယျ ပိုလှမျးတာပါပဲ
ထားပါတော့ … ပွီးသှားတော့မယျ့ဇာတျလမျးဟာ ပွီးသှားတော့မှာပါပဲ ခဏဆုံခဲ့တာပဲလေ ခဏခဈြခဲ့တာပဲလေ တဈသကျစာအတှကျ ရညျရှယျနမေိတဲ့ကိုယျကပဲ ဒီဇာတျလမျးမှာ နာကငျြရတာပါ သူ့လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထားလိုကျရငျ ကိုယျလဲ လှတျလပျနမှောပါပဲ ။
သံသရာတစ်ကွေ့မှာ သူနဲ့ ခဏခလုတ်တိုက်ခဲ့ရုံပါ …
တွေ့ဆုံခြင်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မတော်တဆမဟုတ်ဘူးတဲ့ … ငြင်းပါရစေ တကယ်တော့ သူနဲ့ ဆုံခဲ့တာတော့ တကယ့်ကို မတော်တဆ သက်သက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ ခလုတ်လေး တိုက်မိတယ် ပြီးတော့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် လျှောက်သွားတယ် ဒါပါပဲ ထူးဆန်းတာက အဲ့ဒီထွက်သွားတာလေးကို ကိုယ်က ငေးကြည့်နေမိသေးတာ
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်နာမည်ကို မှတ်မိနေဦးမယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး ကံကောင်းနေပြီလို့ပဲ ဆိုရတာတော့မှာပေါ့ အရာရာကို မှတ်မိနေတဲ့ကိုယ်က အဲ့ဒီဆုံတွေ့ချိန်တိုင်းကို အမြဲအမှတ်ရနေတာတော့ ခက်တယ် ဘယ်လိုပြုံးပြဖူးတာကအစ စကားပြောရင် သူ့နှုတ်ခမ်းလေး ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာအဆုံး အသေးစိတ် မှတ်မိနေတာခက်တယ်
သူက ပေါ့ပါးတယ် ဘယ်အရာကိုမှ သိပ်အလေးအနက်မထားတတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့တွေ တကယ်ပဲ ချစ်ခဲ့တာဆိုတာကိုတောင် သူ စိတ်ထဲရှိမနေတော့ဘူး သံသရာတစ်ကွေ့မှာ ခဏခလုတ်တိုက်ပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက်ပြီးလျှောက်ကြသလို သူကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ သူ့လမ်းသူ ဆက်လျှောက်သွားတယ်
တားလိုက်ရမလား …. ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် မျက်ရည်တွေနဲ့ဆိုရင်ကော ငိုခဲ့ရဖူးပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တဲ့သူ ကိုယ်နဲ့ဝေးမယ့်အရပ်ကိုပဲ ရွေးတာ သဘာဝကျပါတယ် သဘာဝမကျခဲ့တာက သူတောင် ဒီလို အေးစက်ပြီးနေနိုင်ရင် ငါကကော ဘာလို့မနေနိုင်တာလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေတွေဟာ ရှိမနေခဲ့တာပါပဲ ရှာကြည့်ဖူးတယ် ပိုလွမ်းတာပါပဲ
ထားပါတော့ … ပြီးသွားတော့မယ့်ဇာတ်လမ်းဟာ ပြီးသွားတော့မှာပါပဲ ခဏဆုံခဲ့တာပဲလေ ခဏချစ်ခဲ့တာပဲလေ တစ်သက်စာအတွက် ရည်ရွယ်နေမိတဲ့ကိုယ်ကပဲ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ နာကျင်ရတာပါ သူ့လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထားလိုက်ရင် ကိုယ်လဲ လွတ်လပ်နေမှာပါပဲ ။
သူ ကြှနျမကို မခဈြပါလားဆိုတဲ့ အသိလေးဝငျဖို့ … ကြှနျမ အခြိနျတှေ အကွာကွီးနာကငျြခဲ့ရတာပါ
သူ့ကို ခဈြလို့သာ ကြှနျတျော မဆကျသှယျပဲ နနေိုငျအောငျ ကွိုးစားနတောပါ